ဖင်လန်အိုးပေါကျကှဲနှင့်စမတ်စျေးဝယ်များအတွက် AmmoPay ကနေချက်ချင်းချေးငွေများ!
ဖင်လန်အိုးပေါကျကှဲလက်လီကွင်းဆက်စတိုးဆိုင် AmmoPay နှင့်အတူလက်တွဲအတွက်ပစ်လွှတ် Micro-အကြွေးဝန်ဆောင်မှုကြေငြာလိုက်သည်။
ယနေ့ပင်, စျေးဆိုင်များကွန်ယက်«ဖင်လန်အိုးပေါကျကှဲ»အားလုံးကိုဧည့်သည် 28 ရက်၏အကျိုးစီးပွား-အခမဲ့ကာလနဲ့ချက်ချင်းချေးငွေရယူများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေ၏အားသာချက်ယူနိုင်ပါတယ်။ ချေးငွေလျှောက်လွှာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းချေးငွေ၏မှတ်ပုံတင်နှင့်ခွင့်ပြုချက်အပါအဝင်ပိုမသုံးခြင်းထက်မိနစ်ယူပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦး automated လက်ငင်းအကြွေးစနစ်ကဒီဇိုင်းစျေးဆိုင်များအကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက်ကွန်ယက်«ဖင်လန်အိုးပေါကျကှဲ»ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့ပြီးယခုအခါအားလုံးအမှတ်တံဆိပ်-name ကိုစတိုးဆိုင်များများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
မည်သည့်မိုဘိုင်းကိရိယာမှဝက်ဘ်ဆိုက် ammopay.ru အပေါ်အကြွေးလိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်ပုံစံအတွက်လိုအပ်သည့်ငွေပမာဏကိုလုပ်ဖို့လုံလောက်တဲ့။ ချေးငွေပေးအပ်အပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်မချအလိုအလျောက်ဖြစ်ပါသည်: တစ်ခုဆန်းသစ်အမှတ်ပေးပုံစံစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းချေးငွေများ၏ခွင့်ပြုချက်နိုင်ပါတယ်။ ခွင့်ပြုချက်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်, ဖောက်သည်၏မိုဘိုင်းဖုန်းကိုချက်ချင်းငွေမှတ်ပုံတင်အစားငွေသားသို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်ကဒ်မှာဆပ်ဖို့သိမ်းယူနိုင်သည့်ထူးခြားသောငွေပေးချေမှုကုဒ်မှစလှေတျတျောဖြစ်ပါတယ်။ ဤဝန်ဆောင်မှုကိုအောက်မှာပေးဝယ်ယူမှုအပေါ်ချေးငွေပမာဏကို 1.5 ကနေ 30 ရက်တထောင်ရူဘယ်အထိနိုင်ပါတယ်။ တစ်စိမ်းပေါင်းလဒ်သို့မဟုတ်အရစ်ကျပြန်ဆပ်ဖို့ POS များမှသို့မဟုတ်အီလက်ထရောနစ် Qiwi ပိုက်ဆံအိတ်မှတဆင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်နှင့်အတူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်နေ့လျှင် 0.5%, 12 ရက်သတ္တပတ်၏အမြင့်ဆုံးချေးငွေကာလဝယ်ယူသည့် နေ့မှစ. - ချေးငွေပမာဏကိုသုံးစွဲဖို့အခမဲ့ကာလ 28 ရက်, ထို့နောက်မှုနှုန်းဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကိုအဓိကအားမှန်ကန်စွာနဲ့အမြော်အမြင်ရှိရှိဆိုင်မှကိုက်ညီသောသူတို့အားအကျိုးစီးပွားဖြစ်လိမ့်မည်။ AmmoPay ထံမှလက်ငင်းချေးငွေဘတ်ဂျက်ရေတွက်ခြင်းနှင့်နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲစတိုင်ဝတ္တုဖင်လန်အိုးပေါကျကှဲလေးလည်း၏အပျော်အပါးသူတို့ရဲ့အသုံးစရိတ်ကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ပြုပါ။ ရာသီရဲ့အစမှာ, သင်လုံးဝသင့်ရဲ့ဗီရိုကို update နိုင်ပြီး, သုံးလကျော်တဖြည်းဖြည်းချွတ်ဆပ်ဖို့။ သို့မဟုတ်အရောင်းကာလအတိုင်းအတာစတော့ရှယ်ယာ၌ရှိကြ၏စဉ်အခါ, ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုအမြတ်အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့အနှစ်သက်ဆုံးသောအရာတို့ကိုမဝယ်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
E-mail ကို: zadvornov@finn-flare.ru
Tel: 8 (495) 666-21-25 Ext ။ 225
E-mail ကို: pr@moneyman.ru
အမြိုးသမီးမြားရဲ့ Beachwear 2014
အဝတ် - Fall 2014
စားဆင်ယင် - ဆောင်းဦးရာသီ 2014
Boyfriend ဂျင်းဘောင်းဘီ 2016
အမျိုးသမီးနွေရာသီ jumpsuit 2014
ပြတိုက် optical ထင်ယောင်ထင်မှား
Oscillococcinum - ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ညွှန်ကြားချက်
အဝတ်အတွက်အရောင်ပေါင်းစပ် - အစိမ်းရောင်
ရိုင်ယန် Gosling သူမ၏သမီး Amado Lee က၏ဘွားမြင်သောနောက်အီဗာ Mende ၏ဘဝအကြောင်းကိုပြောဆိုသော
တစ်ဦး shish kebab များအတွက်ကြက်သွန်နီစိမ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?